Equip.li - Inyere ndi ozuzu aturu aka na ntughari n’oge COVID-19
Ikwu isi navigation
Gaa na isi larịị
Chọọchị dị n'ịntanetị
Ezigbo ihe atụ nke ụka ntanetị
Etu ị gha esi melite vidiyo gị
Etu esi agwa igwefoto vidiyo okwu
Ndụmọdụ maka iji ekwentị gam akporo iji tinye vidiyo
Kedu ngwa vidiyo anyị kwesịrị iji?
Nhọrọ egwu iwu
Nzaghachi na nkwadebe
Tozọ ikwusa ozi ụlọ ụka dị naanị n'ịntanetị
Njikọ njikọ ntanetịime
Ndepụta echiche vidiyo
Ozi na-enweghị ịntanetị
Kaadi ebe nchekwa maka igwe
Otu dị n'ịntanetị
Partnerskwalite ndị otu ekpere
Ozi ntanetị maka ụmụaka, ndị ntorobịa, na ndị nne na nna
Otu ekpere ndi mmadu nke izu uka nke Sunday
Chọọchị eji eme ụlọ
Ngwaọrụ iji chịkwaa mmetụta uche
Kpọọ edemede maka ụka
Akwukwo nso maka ndi ozuzu aturu n’oge COVID-19
Ọnọdụ COVID-19 siri ike
Ndị ọzọ na-eli ozu
Azịza nke isiokwu nkpuchi
Nyochaa ihe edemede nke ihe nkpuchi nke nkpuchi # 2
Inyere ndi ozuzu aturu aka aka n’agha mgbe COVID-19
Ndụmọdụ ndi nchụ-aja (# 01)
by Ahapụ a Comment
Edere m vidio a na ọtụtụ otu mụ na ndị ozi nọ. Achọpụtara m na ọ bụghị ndị enyi niile nke ozi m nọ na otu ndị ahụ, yabụ ana m ekerịta ya ebe a. Kerịta nke a ma kpoo onye pastọ gị. Ọ ga - agba ya ume. Stepszọ itoolu ị ga - esi mee nke a n'onwe gị ga - enyere gị aka, ọ bụrụgodị na ị bụghị pastọ. Naanị ọsọ ọsọ ruo akara nkeji 13. Anọ m na-arụ ọrụ na akwụkwọ m na-esote (n'agbanyeghị na enweghị m onye nkwusa ma). Ọ ga - abụ ihe nlere na "Enyemaka, m nọ na Charge" - na ndụmọdụ ndị bara uru maka ndị isi. Anọwo m na-egbochi isi akwụkwọ ma na-eme akwụkwọ mbido mbụ. Mgbe m dere isiakwụkwọ a banyere iduzi nsogbu, ekpebiri m na m ekwesịghị ichere ka m kesaa ya ruo mgbe ebipụtara akwụkwọ ahụ. Kama, m kpebiri na m ga-akụzi ya na vidiyo.Ọ bụ ya - enweghị ikike nwebisiinka ọ bụla. Nkeji nkeji iri na atọ mbụ bụ echiche iri (gụnyere abụọ m na-akpọ "nọmba 13") maka ibute ụka gị. maka ijikwa nrụgide na nrụgide. Enwere m ihe 10 na-eme m ka ahụ ike m, nwee ahụike ma dịrị n'ezie n'ọnọdụ a. Ana m ekpe ekpere na enyere gị aka. O buru na inwere echiche ma obu juo ajuju, juo n’okpuru. Ana m emeso ụdị mmetụta na nrụgide niile ị na-enwe. Ọ na-abụ m na-ede akwụkwọ ka m na-emeso ya. Nke a bụ echiche sitere na onye otu anyị na - agba mgba.
Ihe site Rod Loy na Wenezdee, Eprel 1, 2020
You nweghị ike ikenye nsogbu. Na-ekwurịta okwu kwa ụbọchị.
Họrọ ahịrị imecha. (nhọrọ sitere na mgbe steeti nyere ikike ka 2022)
Họrọ ije nwayọ.
Were igwefoto dị ka onye (ịnọ naanị ya, rapaara n'ụlọ); kwusaara igwefoto ozi.
Jiri ọrụ nlekọta n'ọrụ. (belata akwụ ụgwọ ebe ọ bụla enwere ike.)
Jikọọ na ndị ụka. Kpọọ na ekwentị.
Chee ogologo oge. Olee ud i ud i nd i any i kwes ir i iido? mkpa agbaji?
Ọdachi na-abịa ọbụlagodi mgbe ị nọ na nsogbu.
Choo ihe Ido Anya. (Kerịta nri. Ndị ọzọ, ije ekpere, ma ọ bụ Ọzọ)
Pastọ Rod Loy tinyeziri ọkara nke abụọ nke vidiyo ahụ (na akara elekere 13:00) na-edepụta ụdị omume nyeere ya aka ịnagide n'oge a nke COVID-19 (Corona virus).
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ndụmọdụ nye ndị ozi
Nke a bụ nzaghachi nye akụkụ nke isiokwu nkpuchi na-ekpuchi "Ahụ Ike Ndị mmadụ na - eyi ihe mkpuchi, ha kwesịrị ma ọ bụ na ha ekwesịghị?" nke Patricia Neuenschwander (onye nọọsụ practioner), nke Jennifer Margulis dechara, PhD (n'asụsụ Bekee) bido n'isi… [Nọgide na-agụ] banyere Nyocha nke ihe nkpuchi nke nkpuchi-isi # 2
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Uncategorized
Obere obere ìgwè dị iche iche dị anya
Fọdụ gọọmentị na-amachi etu mmadụ ga-ezute. (dịka .gaghị erughi mmadụ iri). Yabụ na ụka ọ bụla nwere nhọrọ ikwe ka onye ọ bụla nọ na chọọchị ha nwee nzukọ na obere ọgbakọ ndị a. Ọ ga-adị mkpa ka nzukọ ndị a ga-adị n'etiti ndị mmadụ… [Nọgide na-agụ] banyere otu obere ìgwè dịpụrụ adịpụ
Nke a bụ nzaghachi nye akụkụ nke isiokwu mbipụta mkpuchi nke Russell Blaylock, nwere isiokwu sitere na "Face Masks Pose Risks Risks To The Healthy" ma ọ bụ "Ihu Masks Nwere Ike Deadnwụ Ahụ Ike Nye Ndị Ahụ Ike Ahụ Na-ekwu Neurologist" Onye bụ Russell Blaylock? Ọ bụghị onye… [Nọgide na-agụ] banyere Azịza nke isiokwu nkpuchi
Governmentsfọdụ gọọmentị anaghị ekwe ka a na-eme oriri maka olili ozu. Ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ: Dọkụ na-awụpụ oriọna kandụl. Isi na nke a ga - enyere gị aka ịme mmemme nke ọrụ ndụ n’ebughi ihe nchebe oria dị mkpa… [Nọgide na-agụ] banyere uzo ozo maka olili ozu
Lalọghachi n ’arụ ụlọ ụka
Fọdụ ndị ọchịchị amalitela ikwe ka ụlọ ụka dị iche iche na-ezukọ n'ụlọ. I nwere ike ikwusara ndị otu ndị otu bọọdụ ị ga - eme na ụlọ ọrụ ị ga - ede ma ọ ga - amalite. Pịa na ajụjụ ise a ga-elele uru na… [Nọgide na-agụ] banyere Ighaghachite nziwanye ulo uka
Ọzọ Page »
Ihe Nlekọta Akara
Chọọ a website
Chọọchị site na vidiyo ntanetị
Ozi maka ndị mmadụ n’enweghị ịntanetị
Akwụkwọ nsọ re: COVID-19
Vidiyo site na gam akporo
Melite vidiyo gị
Gwa igwefoto okwu
Nzaghachi | .Hazi
Deacon itinye aka
Ndepụta Video Video
Otu n'ime ime ime obodo
Kidsmụaka, ndị ntorobịa na ndị nne na nna
Kwupụta naanị ntanetị
Laghachi na elu nke ibe
Copyright © 2020 · Equip.li by Kaadị ebe nchekwa · Sitemap · Banye
Kwadoro site na